Thierry Henry Oo Magacaabay Xidigaha U Qalma Abaalmarinta Ballon D'Or
HomeWararka CiyaarahaThierry Henry oo Magacaabay Xidigaha u Qalma Abaalmarinta Ballon d’Or
Thierry Henry oo Magacaabay Xidigaha u Qalma Abaalmarinta Ballon d’Or
November 15, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain 0
Weeraryahanka halyeeyga ah ee Thierry Henry ayaa ku taageeray Karim Benzema ama N’Golo Kante midkood inuu ku guuleysto Ballon d’Or sanadkan. Laacibka reer France ayaa aaminsan in labadoodu ay ahaayeen kuwa aan caadi ahayn sanadkan oo ay tahay inay noqdaan kuwa ugu cadcad.
Jorginho, Lionel Messi iyo Robert Lewandowski ayaa lagu soo waramayaa inay yihiin kuwa ugu cadcad ku guuleysiga abaal marinta Ballon d’Or sanadkan, laakiin Henry ma xiiseeyo. Waxa uu aaminsan yahay in saddexdaasi ay u qalmaan in ay ka qeybgalaan tartanka balse waxa uu ku taageeray muwaadiniinta dalkiisa si ay u hantaan abaalmarinta.
Henry ayaa qaba in Lewandowski uu ku guuleysan lahaa Ballon d’Or sanadkii hore hadii aan la kansalin. Sannadkan, wuxuu doonayaa inuu arko midkood Benzema ama Kante oo kor u qaadaya koobka.
Isagoo la hadlayay JDD (Journal du Dimanche) , Henry wuxuu yiri:“Aan xaqiiqo noqono, waxaan rajeynayaa inay noqon karto isaga (Karim Benzema) ama N’Golo Kanté, Robert Lewandowski waxaa la dooran lahaa 2020 hadii aan la kansalin, sidoo kale waxaan ka hadli karnaa Jorginho sababtoo ah wax walba ayuu ku guuleystay (Champions Legaue iyo Euro 2020. Waxaana jira Leo (Messi) oo ugu dambeyntii ku guuleystay Copa America.”